‘बेलायती प्रधानमन्त्री मेको नेपाल भ्रमण गराउन प्रयास गर्नेछु’- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
‘बेलायती प्रधानमन्त्री मेको नेपाल भ्रमण गराउन प्रयास गर्नेछु’
चैत्र ४, २०७३ नवीन पोखरेल
लन्डन — ब्रिटेनको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभका एकजना प्रभावशाली सांसद तथा पूर्वमन्त्री सर जेराल्ड होवार्थले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको नेपाल भ्रमणका लागि आफूले पहल गर्ने वचन दिएका छन् ।
नेपाल ब्रिटेन सम्बन्धको २०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि होवार्थले उक्त आश्वासन दिँदै नेपाल ब्रिटेनको एक भरपर्दो मित्र रहेको बताए ।
बेलायत नेपाल सम्बन्धको २०० वर्षगाँठ समापन भइरहँदा कुनै पनि ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छैनन् । दुईसय वर्षगाँठ पूरा भएपछि दूतावासले यस्तो कार्यक्रम गरेको हो । यसअघिका राजदूतले दुईसय वर्ष नहुँदै वर्षगाँठ आरम्भ गरेका थिए भने बीचमा राजदूत नै थिएनन् । अहिले राजदूतले वर्षगाँठ सकिएपछि कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुको बाक्लो बसोबास रहेको अल्डरसट क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने होवार्थले भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारले नगरको विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताए । स्कुल, कलेजमा पढ्ने भूतपूर्व गोर्खाका छोराछोरीहरुले राम्रो गरिरहेको र त्यसबाट अरु ब्रिटिस बालबालिकालाई पनि उत्प्रेरणा मिलेको उनले बताए । सर होवार्थले सन् १९६० यता ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई झण्डै दुई अर्ब डलरबराबर सहायता दिएको स्मरण गर्दै नेपालको विकासमा सघाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । गत बीस वर्षदेखि सांसद रहेका होवार्थ अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति हेर्ने भूतपूर्व मन्त्री पनि हुन् । ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाड्नु पर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गरेका होवार्थले ब्रेक्जिटपछि ब्रिटेनले नेपालजस्ता मित्रहरुसँग अरु निकट सम्बन्ध कायम राख्ने पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री मे ले राम्रो काम गरेको भन्दै उनको प्रशंसा समेत गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले नेपाल भारत सम्बन्धबारे जान्न चाहने जोकोहीले पहिले नेपाल ब्रिटेन सम्बन्धको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सुगौली सन्धि विजेता ब्रिटिस इन्डियाले नेपालमाथि थोपरेको भए पनि दुई देशबीच सन् १९२३ मा सम्पन्न सन्धिले नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको बताए । सन् १९९० पछि पढ्न र काम गर्न बेलायत आउने नेपालीहरुको संख्या बढेको र यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध विकेन्द्रीकृत बन्न पुगेको उनको निचोड थियो । लन्डन विश्वकै वित्तीय केन्द्र भएकाले प्रा. सुवेदीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन ठूला ब्रिटिस कम्पनीहरुसम्म पहुँच पुर्‍याउन नेपाल सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा डा. कृष्ण अधिकारीले लन्डनमा बसोबास गर्ने पहिलो नेपाली मोतिलाल सिंहबारे, डा. मारा मालागोडीले नेपालको संवैधानिक विकासबारे तथा सेवानिवृत्त कर्णेल जेरी बर्चले ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहासबारे बोलेका थिए । अन्तरक्रिया सञ्चालन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. डेविड गेलनरले गरेका थिए । सोही अवसरमा ब्रिटिस चित्रकार स्टेफेन किङले नेपालको लाङटाङ क्षेत्रमा गएर खिचेका तस्बिरहरुको प्रदर्शनी गरेका थिए भने अस्मिता श्रीसको वृत्तचित्र पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र ४, २०७३ १७:४९
स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ प्रकारका मतपत्र
काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ प्रकारका मतपत्र हुने तय गरेको छ ।पचहत्तरै जिल्लामा फरक फरक सङ्ख्यामा दलले निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि सानाठूला गरी विभिन्न छ आकारका मतपत्र बनाउने तयारी भएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ प्रकारका मतपत्र हुने तय गरेको छ ।
पचहत्तरै जिल्लामा फरक फरक सङ्ख्यामा दलले निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि सानाठूला गरी विभिन्न छ आकारका मतपत्र बनाउने तयारी भएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा सात दल दर्ता भएका छन् । आयोगले शनिबारदेखि मतपत्र छाप्ने भने पनि तयारी नपुगेपछि अब एक/दुई दिनमा सुरु गरिने भएको छ । आयोगले मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा छाप्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनमा करिब एक करोड ४० लाख मतदाता र २१ हजार मतदान केन्द्र रहने अनुमान गरेको छ । निर्वाचनमा नगरपालिकामा एक हजार ४८८ प्रमुख उपप्रमुख तथा ७८९ दलित/अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै गाउँपालिकामा ३३ हजार चार सय वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नौ सय ६२ दलित/अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । कुल ३६ हजार छ सय ३९ पदका लागि निर्वाचन हुने छ । आयोगमा दर्ता भएका कुल एक सय १३ दलमध्ये तोकिएको समयमा ७९ दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका छन् ।
मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका गरी सात सय ४४ स्थानीय तह तथा सबै तहमा गरी कुल छ हजार छ सय ८० वडा छन् । त्यसमध्ये संसद्‌मा हाल प्रतिनिधित्व गरेका २६ दलले मात्र आफ्नो चुनाव चिह्नसहित भाग लिन पाउनेछन् । बाँकी दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले भने आयोगले निर्धारण गरेको चिह्नका साथ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने आयोग, कानुन तथा राजनीतिक दल शाखाका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले बताए ।